Homo Loves: Pizza boy
ကျွန်တော့ အသက်၃၀ ပြည့်နေပြီ။ ဒါပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ တောင့်တောင့် တင်းတင်း နဲ့ကြည့်လို့ ကောင်းတုန်းပါပဲ။ ဟုတ်တယ်။ ကျွန်တော်က Gym ကစားဖြစ်တယ်။ အိမ်မှာလည်းရှိတယ်လေဗျာ။ ရုံးပိတ်ရက်တစ်နေ့ တုန်းကပေါ့။ထုံးစံအတိုင်း အိမ်မှာ Gym တယ်။ ကစားပြီးတော့ ဗိုက်ဆာလာတာနဲ့ Freezer ထဲမွှေကြည့်တယ်။ စားစရာဘာမှမရှိတာနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ နဲ့ အဆင်ပြေနိုင်မယ့် pizza ကိုဆိုင်တစ်ဆိုင်ကနေ order မှာလိုက်တယ်။ နောက် ၁၅ မိနစ်အတွင်းရေမယ်တဲ့။ အဆိုးပါဘူး လူကလဲ ချွေးတွေနဲ့ ဆိုတော့ ရေချုိးရင်းစောင့်နေလို့ရတယ်။ ရေချိုးတာ လူကို လန်းဆန်းနေတာပဲ။ရေချိုးရင်း ကျွန်တော့ငပဲလေးကို ဆွနေမိတယ်။ ကျွန်တော့ငပဲကို မြင်ဖူးတဲ့သူတော်တော်များများက မှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်။ ကြီးလွန်းလို့တဲ့။ ၇ လက်မလောက်ရှည်ပြီး လုံးပတ်ဟာ လက်မနဲ့လက်ခလယ်ထိဖို့ လက်တစ်လုံးစာလောက်လိုသေးတယ်။
ကျွန်တော် ပြုံးလိုက်တယ်။ အဲဒီအပြုံး ဟာ အဓိပ္ပါယ်တွေအများကြီးပါတယ်ဆိုပါတော့။ ရေချုိးဇလားထဲကနေ ထွက်လိုက်ပြီး ပဝါ တစ်ထည်ကို လှမ်းယူလိုက်တယ်။ ဒီပဝါစကို ခါးမှာမပတ်ဘူး။ တစ်ကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့ ရေတွေကို သုတ်ရင်းနဲ့ အပြင်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ Pizza လာပို့တဲ့ကောင်လေးက ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေမလဲမသိဘူး။
Boy, I want to be fun with you!
အဲဒီအတွေးနဲ့တင် လူဟာ turn on ဖြစ်လာတယ်။ငပဲကလည်း ခပ်ငေါက်ငေါက်ဖြစ်လာတာပေါ့။ ဧည့်ခန်းထဲရောက်တော့….
ကောင်လေးက အရမ်းလန့်သွားတယ်ထင်တယ်။ မှင်သက်သွားတယ်။ ပါးစပ်ကို ဟ,လို့။
တံတွေတစ်ချက်မြိုချလိုက်သံကို ကြားလိုက်ရတယ်။ကောင်လေးက ခပ်ချောချောလေးပါပဲ။ အသက်က ၂၀ လောက်ထင်ပါရဲ့။ စွပ်ကျယ်လေးနဲ့ ဂျင်းပင်ပွပွလေးကို ဝတ်ထားတယ်။
သူ့မျက်လုံးတွေက ကျွန်တော့ငပဲ ဆီကနေမခွာဘူးဆိုပါတော့။
“ဘာဖြစ်တာလဲ မင်းရှေ့မှာလူကြီးတစ်ယောက် အဝတ်မပါပဲ နေနေတာ မမြင်ဖူးဘူးလား။”
“အင်း ဟို အဲဒါကလေ…………….”
“မင်း တစ်ခုခု လိုချင်နေတာလား။ ငါကူညီပေးနိုင်မယ်ထင်တယ်။”
သူတစ်ခုခုပြောဖို့ ကြိုးစားလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က လျှင်လျှင်မြန်မြန်နဲ့ သူ့မေးရိုးကို ဆွဲကိုင် လိုက်ပြီး သူ့နှုတ်ခမ်း ကို ဆွဲစုပ်လိုက်တယ်။ သူတစ်ခုခုကို ထိထိမိမိ ခံစားလိုက်ရတယ် ဆိုတာ ငြင်းစရာမလိုဘူး။ သူကလည်းပြန်နမ်းတယ်။ လျှာတွေနဲ့ ကလိတယ်။ နှုတ်ခမ်းတွေကိုစုတ်တယ်။ သူလည်းမခေဘူးပဲ။ ကျွန်တော့လက်တွေဟာ သူ့ဂျိုးအောက်ကနေ သူ့ကျောပြင်ကို ပွတ်သတ်လိုက်နေတယ်။ သူ့စွပ်ကျယ်ကို ချွတ်ပစ် လိုက်တယ်။ သူ့လက်တွေကတော့ ကျွန်တော့ ငပဲပေါ်မှာပေါ့။ သူ့ပေါ်ပိုင်းကို ဖုံးအုပ်ထားတဲ့စွပ်ကျယ် မရှိတော့ သူ့နို့သီး နီနီလေးတွေကို လျှာနဲ့ကလိလိုက်တယ်။
ပြင်းပြတဲ့ အသက်ရှူသံနဲ့ ရောနှောပြီး မိန်မော ညည်းတွားသံတွေက သည်းလာတယ်။ပြီးတော့ သူ့ဗိုက်သား တွေကိုလျှာနဲ့ အပြားလိုက်ကြီး သပ်ချလိုက်ရင်း ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်တယ်။ ဘောင်းဘီကြယ်သီးနဲ့ ဇစ်ကို ဖြုတ်လိုက် တော့……………
ထင်ထားတာထက်ပိုပြီး ရှည်ပြီး တုတ်မာနေတဲ့ အသားချောင်းကြီး တစ်ချောင်းက ပါးပြင်ကို ပုတ်မိတယ်။ အရည်ကြည်လေးတွေကလည်း အိုင်လို့။ ငေါက်ခနဲ ငေါက်ခနဲ ဖြစ်သွားတာက လူကို ညှို့ငင်နေသလိုပဲ။ ပါးစပ်ပေါက်ကို အကျယ်ဆုံးဖြစ်အောင်ဟလိုက်ပြီး သူ့ငပဲလေးကိုအာခေါင်ထိအောင် ထိုးချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ပါးစပ်ပေါက်ကို ပြန်ပိတ်ပြီး အပြင်ရောက်အောင် ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။
မပီသတဲ့ အော်ညည်းသံတွေက အသက်ရှူသံတွေနဲ့ ရောထွေးနေတယ်။ သူ့ငပဲကို ညင်ညင်သာသာလေး စုပ်နေတာကနေ တဖြည်းဖြည်း အရှိန်ကို မြှင့်လိုကတယ်။ သူ့ခါးကိုလည်းကော့ကော့ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်နေ လိုက်သေးတယ်။ ရှီး….. အား……..အိုး ဆိုတဲ့အသံတွေက ပိုပြီးကျယ်လာတယ်။ ခပ်ကြာကြာလေး blowjob လုပ်ပြီး တော့ ကျွန်တော်မတ်တတ်ရပ်လိုက်တယ်။ သူ့နှုတ်ခမ်းကို အားရပါးရပြန်စုပ်ပြီး သူ့ပုခုံးနှစ်ဖက်ကို မသိမသာ ဖိချလိုက် တယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ ဒူးတွေက သိသိသာသာ ကွေးကျသွားတယ်။ အနမ်းတွေဟာ လည်ပင်း၊ ရင်အုံး၊ ဗိုက်သား တစ်ဖြည်းဖြည်း ဆင်းကျသွားတယ်။ ပြီးတော့ သူကကျွန်တော့ ဆီးခုံပေါ်က အမွှေးခပ်ရှုပ်ရှုပ်တွေပေါ် မေးနဲ့တွန်းထိုး ကစားနေ လိုက်သေးတယ်။ ပြီးတော့ သူကျွန်တော့ကို blowjob ကောင်းကောင်းပြန်လုပ်ပေးတယ်။ သူဟာတော် တော်လေးကို ကျွမ်းကျင်တယ်။ ဒစ်ခေါင်းလေးကိုလျှာနဲ့ ဝိုက်ပြီးကစားတယ်။ ထိပ်ကိုငုံထားပြီး အရင်းပိုင်းကို လက်နဲ့ -ွင်းထုပေးတယ်။ ဥလေးတွေကို ငုံစုပ်ပေးတယ်။ အချိန်တော်တော်ကြာတဲ့အထိ blowjob ကောင်းကောင်း လုပ်ပေး တယ်။ ကြာလာတော့ တံတွေးတွေတောင်သီးလို့။
Blowjob လုပ်တာတော်ပြီဆိုတာ ကျွန်တော်နားလည်လိုက်တယ်။ ဒါဆိုနောက်တစ်ဆင့်က Rim job ပေါ့။ သူ့ကို ထိုင်ခုန်ပေါ်မှာ လေးဖက်ကုန်းစေလိုက်တယ်။ သူ့တင်ပါး ဖွေးဖွေး လေးကြားမှာ ဝှက်ထားတဲ့ ခရေပွင့်လေး ကို နမ်းချလိုက်တယ်။ လျှာနဲ့ကလိပေးတယ်။ ကျယ်လောင်တဲ့ ညည်းသံတွေက အခန်းထဲမှာ ပြန့်နှံနေတယ်။ အတန်ကြာအောင် Rim job လုပ်ပေးလိုက်တော့ စိုစွတ်နေတဲ့ ခရေပွင့်လေးဟာ ကျွန်တော့ငပဲကို လက်ခံဖို့အသင့်ဖြစ် သွားတယ်။ ညာလက်ကနေ သူ့ခါးကိုကိုင်လိုက်ပြီး ဘယ်လက်နဲ့ တေ့ပေးလိုက်တယ်။ ခရေပွင့်လေးနဲ့ ကျွန်တော့ငပဲ ကြီးကိုပေါ့။ ညင်သာတဲ့တိုးဝင်မှုတစ်ခုပါ။ ဒါဟာနာကျင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလေ။ ဒါပေမယ့် သူ့ညည်းညူသံတွေဟာ နာကျင်မှုတွေကိုပြနေသလားပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ နောက်တော့ သူသာယာသွားပါတယ်။ သူကျေနပ်တယ် ထင်တယ်။ အော်ညည်းသံတွေဟာ ချိုသာနေတယ်။ အရှိန်ရလာတော့ ကျွန်တော့ခါးကိုရှေ့တိုးနောက်ညင်နဲ့ လှုပ်ရှား မှုတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ တင်းကျပ်တဲ့ ကျင်းဝတစ်ခုကို ထိုးသွင်းလို့ခံစားရတဲ့ အရသာ(feeling) ကလည်း အဆုံးစွန်သော သာယာမှုတွေပါပဲ။
“ဟုတ်ကဲ့” တဲ့။ ရိုကျုိးမှုတွေ ပါဝင်နေတဲ့လေသံကလည်း မောဟိုက်နေတာပါပဲ။ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ကျွန်တော် ပက်လက်လှဲချလိုက်တယ်။ သူက ကျွန်တော့ကို ကျောခိုင်းပြီး ငပဲတည့်တည့် ထိုင်ချလိုက်တယ်။ လမ်းကြောင်းရှိပေမယ့် ကျပ်လွန်းတဲ့ ကျင်းငယ်လေးမို့လို့ ခံစားမှုဟာ ပြင်းထန်လှပါတယ်။ သူကပေါ်ကနေ ဆောင့်ချက်တွေ ဖန်တီးပေး နေသလို ကျွန်တော်ကလည်း အောက်ကနေ ပင့်ချက်တွေနဲ့ပေါ့ဗျာ။ နှစ်ဦးသားစလုံးရဲ့ ပါးစပ်တွေဟာ ညည်းညူသံ တွေနဲ့ ပြည့်နေတယ်။ သူ့ရင်ဘက်ကို ကျွန်တော်လှမ်းဆွဲလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်တ နှစ်ယောက်ဟာ တစ်ထပ်တည်းကျနေတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ညာဘက်ကို စောင်းလိုက်တယ်။ ငပဲဟာ အပြင်ကို ပြုတ်ထွက်လာတယ်။ သူ့ဘယ်ဘက်ပေါင်ကိုမြောက်ပြီး သူ့ခရေဝဆီကို ကျွန်တော့ငပဲ သိပ်ထည့်လိုက် တယ်။ ဒီ position ကလည်း မတူညီတဲ့အရသာတစ်မျိုးကို ခံစားစေတယ်လေ။ သူ့ငပဲကို သူကိုင်နေရင်း သူမထိန်းနိုင် တော့ဘူး။
သူ ပြီးသွားပြီထင်တယ်။ အင်းဟုတ်တယ် သူ့ကိုယ်တွင်းဖြစ်ရည်တွေက ကော်ဇော်ပေါ်မှာ ပွလို့။ သူ့ရဲ့ ကိုယ်တွင်းဖြစ်ရေတွေကိုကြည့်ရင်း ကျွန်တော်လည်းပြီးချင်လာတယ်။ ကျွန်တော်လည်းငပဲကိုထုတ်ပြီး သူ့ပေါင်ကြားမှာ ပန်းချလိုက်တယ်။ သူနောက်ပြန်လှည့်ရင်းကျွန်တော့နှုတ်ခမ်းကို လှမ်းပြီနမ်းဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းကိုရှေ့တိုးပေးလိုက်ပါတယ်လေ။ လက်တွေကတော့ ကိုယ့်ငပဲပေါ်စီမှာပေါ့ဗျာ။
“No, I lose my order.” ဆိုပြီး အဝတ်အစားတောင် သေသပ်အောင်မဝတ်ပဲ (အဝတ်အစားတွေကို ကောက်ပြီး) ထွက်ပြေးသွားတယ်။
သူကြားမယ် ဆိုတာ မသေချာပေမယ့် ကျွန်တော်လှမ်းပြောလိုက်တယ်။
ဝန်ခံချက်။ အင်တာနက်ထဲမှ pizza boy ဇာတ်လမ်းတိုလေးကို ရေးသားသည်။
အမှာစာ။ နောက်ထပ် ဇာတ်လမ်းတွေတင်တဲ့ အခါမှာ link တွေကိုလည်း တစ်ခါတည်းတင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်။ အားပေးဖတ်ရှုသူတိုင်းအတွက် အချိန်ပေးဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒိထပ်ပိုပြီးကြိုးစားပါမယ်။ Sex stories တွေသာမက love stories တွေကိုလည်း ရေးသားထားပါတယ်။ တင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်။
Posted by Min Lay at 7:22 AM
hetian xiang March 16, 2014 at 6:13 AM
ma soe bar bu read lo koung par ta.